Vaovao - YALIS Tantana varavarana
YALIS dia hiseho ao amin'ny Interzum@home 2021
Noho ny fiantraikan'ny COVID-19 dia niova ho sehatra nomerika an'ny Koelnmesse ny Koelnmesse roa taona. Interzum@home dia hatao ny 04. hatramin'ny 07.05.2021. Ao amin'ny interzum@home, orinasa maherin'ny 140 avy amin'ny firenena manodidina ny 24 no hanolotra ny vokatra sy serivisy ao amin'ny sehatra nomerika an'i Koelnmesse.
YALIS Design dia mpanamboatra malaza manokana amin'ny tantana varavaranaary kojakoja fitaovan'ny varavarana ho an'ny varavarana. Tamin'ny Mey 2019, nandray anjara tamin'ny fampirantiana ivelan'ny aterineto an'i Koelnmesse i YALIS, ary nankasitrahan'ny mpanjifa sy neken'ny rehetra. Noho izany, YALIS dia handray anjara amin'ny Koelnmesse 2021 nomerika ary hanohy hitondra ny vokatra sy vahaolana farany amin'ny mpanjifa.
Ahoana no ahitanao YALIS ao amin'ny interzum@home?
Midira ao amin'ny sehatra nomerika interzum@home: home.interzum.de misoratra anarana.
Karoka "YALIS"na"YALIS Design” on home.interzum.de mba hahita anay.
Ao amin'ny digital interzum@home dia azonao atao ny mijery mivantana ny vokatray farany, afaka mifandray aminay ihany koa ianao, na afaka manao rendez-vous miaraka aminay. Tsy andrinay ny hihaona sy hifandray aminao ao amin'ny digital interzum@home.
Raha manana fanontaniana ianao dia alefaso mailaka izahay amin'ny info@yalisdesign.com na mamela hafatra aminay amin'ny Internet, hamaly anao izahay ao anatin'ny 24 ora
YALIS Design, matihanina avo lenta varavarana fitaovana vahaolana mpamatsy.